China Vagadziri Vanodzika Matende Pop Up Wholesale Vatengi Tenga Kunze Kambi Tende Mugadziri uye Mutengesi | NQ
Vagadziri Vanodzika Matende Pop Up Wholesale Vatengesi Tenga Kunze Kwemusasa Tende
Tende rinoita kuti kumisikidzwa kumiswe nekukurumidza uye nyore kupfuura nakare kose. Iyi tende iri ipapo ine matanda akaiswa-mberi ayo anoita kuti kumisikidza musasa zvive nyore sekuburitsa, kutambanudza, uye kuchengetedza. Iwe unogona kuunganidza tende mukati meminiti uye wotanga pane yako yekushanya
Tende rekudzika musasa rine nzvimbo yakakura yemunhu 4, 7'3 '' x 7'8 '' saizi yepasi ine 4'7 '' nzvimbo yekukwirira zviri nyore kuti ikwane mhuri yese. Zvipfeko zvakakura pamativi ese maviri ezvinhu zvako kana imbwa yako. 7.4 lbs zviyereso zvakangonaka kune munhu mana tende rekudzosera kumashure.
Iwe unoda here kuita kuti iyo musasa iwanikwe nyore? Sarudza smartly engineered kupeta musasa tende. Yedu inotakurika yekupeta matende matende anosanganisira akangwara maficha ekuita kuti musasa zvive nyore uye zvakawanda zviwanikwe. Nekuda kwekuti ivo vakagadzirirwa zvekunze kwekunze, ivo vakaomarara zvakakwana kuti vamire kune ako makuru ekunze adventures. Yakareruka uye compact, matende edu ekupeta matende akagadzirirwa kuenda kwaunoenda.
Yemahara-yakamira uye maviri akareruka Aluminium matanda dhizaini yekukurumidza kumisa. Nyore kumisikidza isina ruzivo. Iyi tende rekudzokera shure rakabatana uye rinotakurika, zvakare rakakura kune Hiking, Bikepacking, Kayaking, Mountaineering, Fishing kana Car Camping
1.Tende rekudzika musasa rakagadzirwa nesimbi yakasimba uye yakajeka ye polyester jasi nemvura-chiratidzo.
Inogona kupetwa, chengetedza nzvimbo uye nyore kutakura.
3.Opens uye folds mune yechipiri uye hapana gungano rinodiwa
4.OEM / ODM inowanikwa.
5.Customize yevatengi 'Logo sechipo chekusimudzira.
6.Ichienderana nehunyanzvi hwazvino hwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
7.We tinokwanisa kupa mhando dzezvinhu sekuenderana nezvinodiwa.
General pasuru: Dia.60cm / handbag
Kana iwe uine chakakosha chinodiwa ingondiudza, tichaita zvatinogona kuti tikubatsire.
Pashure: Yakadhindwa yekudzidzira mhando yakanaka pu yeganda mma tsiva magurovhosi anokunda tsika logo tsiva magurovhosi
Zvadaro: Wholesale Cheap Adjustable Spring Inorema Magnetic Massage Foam Fitness HuLa Hula Hoola Sports Fitness Mhete Hoop ine Kurema